Ufuna ukuthuthukisa abesifazane kwezesayensi
UNKSZ Thando Gumede (28) usungule inkampani ethuthukisa ulwazi kwezobuchwepheshe nakwisayensi. Izithombe: ZITHUNYELWE
Mbali Khanyile | May 20, 2021
UKUSHODA kwamathuba omsebenzi akumthenanga amandla owesifazane waseMnqobokazi, eHluhluwe, osenenkampani egxile ekwenzeni imisebenzi yezobuchwepheshe nezesayensi.
UNKSZ Thando Gumede ( 28), owathweswa iziqu zeBachelor of Science in MicrobioBiology and Hydrology eNyuvesi iZululand ngo-2015, uthi kuqale kwaba wumqansa ukufeza iphupho lakhe ngoba abanye abantu bebengakholelwa kulo.
“Izikole zabantu abamnyama zinezingqinamba zokuswela izinsiza yingakho ngabona kungaba wusizo ukuthi ngivule iBased on Science Guidance and Technologies. Kule nkampani silekelela abafundi sibuye sibafunise izikhala ezikhungweni zemfundo ephakeme. Uma izitshudeni seziphothule iziqu zazo, siyaye sizilekelele ekutheni zithole izikhala zokuthi ziqeqeshelwe umsebenzi ezinkampanini ezigxile kulo mkhakha,” kuchaza uNksz Gumede.
UNKSZ Thando Gumede efundisa abanye babafundi baseMkhanyakude ngemisebenzi yesayensi
Eqhuba uthe umsebenzi wabo waselabhoretri bavamise ukuwufaka kwi-App esetshenziswa yizitshudeni ngenhloso yothuthukisa ulwazi ngalo mkhakha. Le App inemininingwane yemifundaze esuke ikhishwe yizinkampani ezahlukene.
“Bengihlale ngizibona ngisebenza ezibhedlela ngesikhathi ngisakhula. Isifiso sami kwakuwukusebenza ema-labhoretri azo ngenhloso yokuthi nami ngibe neqhaza engilibambayo ekulweni nezifo eziyinkinga emphakathini. Kodwa-ke angivumelanga ukutheneka amandla njengoba kwagcina ngokuthi ngiqoke ukuzisebenza,” kubeka lo somabhizinisi.
Uthe isikhath basebenzisana nezikole zamabanga aphansi naphezulu eMkhanyakude, kanjalo nezikhungo zemfundo ephakeme.
“Isifiso sethu wukuba sithole abaxhasi abangakwazi ukufaka isandla sifinyelele ezindaweni ezahlukene. Ngoxhaso singakwazi ukunyusa isibalo samaphrojekthi kanjalo namathuba omsebenzi entsheni eswele naleyo elahlekelwe wumsebenzi ngenxa yeCovid-19,” kubeka uNksz Gumede.
Ithe kumaphrojethi abamatasa ngawo kumanje, bagqugquzela ukuthuthukisa ikhono labesifazane kwezobuchwepheshe njengoba kugcwele kakhulu abesilisa.
Phakathi kwezinkampani abasebenzisana nazo ubale umnyango wezeSayensi nobuChwepheshe, umnyango wezeMfundo, iSouth African Agency for Science and Technology Advancement (SAASTA), iNational Research Foundation nesifunda saseMkhanyakude.
Injabulo kuMazet eqokelwa kwibhodi yenkampani ekwiJSE